Nhanhatu nzira dzaunogona Kuongorodza Yako SEO Performance uye Shandisa Iyo Ruzivo Kuisa Yakakwira paGoogle
Nezvokutanga zvishanu zvisikwa zvinorairwa zvinodaira kusvika makumi manomwe muzana ezveGoogle zvekudhinda. Izvo zvinodikanwa kuti uve nekunzwisisa kwakakwana kweSEO analytics. Kunyange uchishandisa zvishandiso zvaSemalt zvichakubatsira iwe kusvika ipapo, zvakakosha kuti uzive zvauri kutarisa uye kuti zvinokubatsira sei.
Pazasi, tichave tichienda pamusoro pezvitanhatu zvinhu izvo iwe zvaunogona kushandisa kune yako nzwisiso yeSEO. Nekunzwisisa musoro wenyaya, unogona kusundira webhusaiti yako kusvika iko iko kutsvaga kwayo kungazvibatsira iko pachayo. Haisi rondedzero-inobatanidza zvese, asi ichakupa kunzwisisa kwakasimba kwekuti ungatanga sei.
Tarisa misoro yako.
Shandura zvaunotsanangura meta.
Tarisa uone vatambi vako zvemukati.
Tarisa mazwi akakosha auri kushandisa.
Shandisa Semalt yemahara webhusaiti kuongorora.
Chengetedza mari mu SEO Campaign.
Tarisa Misoro Yako
Kubva pamazuva ekutanga ekugadzirwa kwezvinhu, iwo musoro wenyaya wakagara wakachengetedza yakakwirira. Kushandisa H2 yako H3 uye H3 mazita nenzira yakakodzera inopa maitiro akajairika kuverenga. Paradzai munzvimbo dzakakodzera kuti averenge kuverenga. Maitiro aya anokurudzira vaverengi kuti vagare, vachiita kuti webhusaiti yepamusoro ive mumainjini ekutsvaga.
Iyi nzira yega haisi kuzove neyakawanda yekukanganisa yako SEO. Asi kana uchibatanidza izvi nemashoko akakosha, vaverengi vanogona kunge vachakuwana uye vanonamatira. Iwe unokwanisa kuramba uchitarisa webhusaiti kana zviri nyore kuverenga.
Paunenge uchichinjisa misoro yako, edza kufunga nezve blog yako yekutumira sebhuku. Iyo H1 inofanirwa kuve yako musoro, uye inofanira kuzivisa vaverengi zvavanoda. Nechidimbu, ini ndine mazano maviri.
Chekutanga sarudzo ndeyekuwedzera yako pasi pacho sechibatsiro chirevo chakamisikidzwa kunoperera zita rako. Chechipiri sarudzo ndeye kuendesa sumo inoteverwa negwaro riri pasi rine tsanangudzo yakadzama yemusoro wenyaya. Sarudzo yechipiri inoita kuti muverengi apinde mupfungwa iyi sarudzo yekutanga painosvika padanho. Iko hakuna imwe nzira chaiyo yekuita izvi, saka tamba uchitenderera kusvikira iwe wawana chimwe chinhu chinoshanda.
Shandura Meta Tsananguro Yako
Chimwe chezvikamu zvisina kunyanyogadzirirwa chewebsite yako ndeye meta tsananguro. Vanhu vazhinji havazive kuti iyo meta tsananguro iri pane imwe neimwe peji. Nekuva neizvi, iwe une mukana wepamusoro weiyo peji imwe kana zvinyorwa zvinyorwa.
Iri peji rino rinotungamira vanhu kune zvimwe zvikamu zvewebsite yako, kwavanogona kutora mukana webasa rako. Pa google, iyo meta tsananguro iri pazasi peji peji yekutsvaga izwi. Ona pazasi muenzaniso wemufananidzo.
Kubva pane iyo SEO yekumira, kuisa akakosha akakosha mune iyo meta tsanangudzo ndiyo nzira yakanakisa yekukwira pamjini yekutsvaga. Kunyangwe kana mazwi ari murondedzero iyi asingabatsire SEO yako, zvinopa muverengi zano rezvaanofanira kutarisira vasati vazvipeta. Kusava nerondedzero yemeta mukana wakakanganisika.
Paunenge uchigadzira yako meta tsananguro, edza kuita kuti zvinhu zvipfupi uye zvakananga. Iva nerunhare rwekuita (CTA) uchiudza vanhu zvekuita mukati meiyi tsananguro. Maitiro chaiwo ndeokuchengeta pazasi zana nemakumi mashanu.
Tarisa uone Zvako zveMakwikwi
Funga nezvemashoko akakosha, zvemukati, uye chimiro kana uchitarisa izvo zvirimo. Pfungwa haisi yekuba fomu yavo. Chinangwa chako chinofanira kunge chiri kuvandudza pane zvavari.
Semuenzaniso, kana iwe uri wekushambadzira mumiririri anogadzira zvemukati wekambani shangu shangu, iwe uchada kutarisa izvo vanhu vari mumamiriro ako ezvinhu vari kuita. Iwe waizoda kugadzira zvemukati zvinonakidza kune vavanotarisana navo. Semuenzaniso, Zappos inoda vakuru vechidiki iyo inosimbisa chimiro uye kunaka.
Kana kambani yako shangu ichida kukwikwidza, chinangwa chekupedza chichava chekutora kambani seZappos. Nekudaro, kana iwe uri kutanga, iwe unofanirwa kutsvaga mamwe makambani ari kuita zvimwechete newe uye kugadzira zvirimo zvinogadzirisa pane izvo zvatova kuitika. Semuenzaniso, kana shangu dzakakwirisa-musana dzadzoka muchitaera, iwe uchazoda kunongedza iro "repamusoro-shangu shangu" izwi rekutanga.
Iwe waizonyora akawanda zvinyorwa akanangana nenyaya iyo inosanganisira mirairo yenzira yekuvachenesa nemazvo, mabhurui avanofamba nawo, mashati avanofamba nawo, uye maitiro ekuita kuti agare nekusingaperi. Kana imi vaviri mukaita runyorwa kutumira, chinangwa chenyu chingave kuita kugadzira musoro uye zvirimo zvinopfuura zvavo. Kana iwe uri kutarisa kuwanda, avo matatu anoda kuenzana neyako nhanhatu.
Tarisa mazwi akakosha auri kushandisa
Iyi musoro wechimwe chinhu chekuwedzera yeyedu yepakutanga positi, asi mazwi asiri iwo akakosha mumusoro mako uye zvemukati zvinogona kukwezva vanhu vasina kunaka. Uchishandisa muenzaniso pamberi, kana urikugadzira mabloggi anotarisisa shangu, haudi munhu ari kutsvaga mahembe. Kuenda kweshoko rinokosha "nyoro polyester" haisi kuzobatsira kambani yako shangu zvakanyanya.
Zvakare, iwo mazwi akakosha aunoshandisa anogona kunge akakwikwidza. Kune emakambani madiki, angangoda kunongedza mashoma akanganisa mazwi. Hazvibatsiri kuyedza uye kuendesa "shangu nyowani" apo mazana matatu emamwe makambani anoda kuita chinhu chimwe chete. Mazhinji emakambani ari pazasi anozivikanwa, akavimbika mavara.
Tsika yakaipa yandinowanzoona mazuva ano ndeye "keyword stuffing." Keyword stuffing inoedza kupinza mazwi mazhinji anotsvaga mu blog kuti iite kuti iratidze injini yeGoogle. Dambudziko nezano iri nderekuti Google's AI inoziva iyi nyaya. Vaya vanoedza keyword stuffing vangangove vasiri yakakwirira.
Kuti uwane zano rakanaka rekuti mashoma anoshanda sei, unogona kushandisa google chete. Nekutsvaga izwi iro iwe raunofunga kuti rinounza vanhu kuwebhusaiti yako, unogona kuwana izvo mamwe mawebhusaiti zveizwi iro. Kana idzo mawebhusaiti dzikaitika kuva mune yako niche, saka iwe une yakakosha kiyi. Nekuwedzera zvinhu kuzita iro rinokosha, unogona kudzikisira pasi penyaya.
Shandisa Semalt Yemahara Yekuongorora Webhusaiti
Mawebhusaiti, pamusoro pekutanga kuvandudzwa, nemasikirwo ane nyaya dzakasiyana dzakasiyana. Ivo vanogona kuve nekupaza ma-link, kuwanda kuwedzeredzwa, kusashanda optimization, uye unonoke kutakura. Semalt YeMahara Webhusaiti Inotsvaga inotsvaga kuti ione izvi zvinhu.
Iyo Webhusaiti Webhusaiti chishandiso inokupa iwe zvishandiso zvinodiwa kuti ubatanidze akawanda ezvematambudziko atakataura nawo pakutanga, asi ese ari muchirongwa chimwechete. Neichi chimiro, iwe haufanirwe kubhadhara kuti uwane pfungwa yekuti yako webhusaiti yakamira papi. Nekudaro, avo vasiri nyanzvi vanofanirwa kufunga nezve SEO Campaign.
Uine chishandiso chakakodzera chekuongorora, iwe uchave nekunzwisisa kuti chii chinobaya kune yako webhusaiti chiri kukonzera kushandurwa uye ndeapi mazwi ekuwedzera kuwedzera traffic kune yako saiti. Nepo zvese zviri zviviri zvinobatsira nekuda kwezvikonzero zvakasiyana, kana yako SEO yekunongedzera chinangwa chekuti uwedzere kutengesa, haudi zita rakakosha rinokwezva vashanyi. Pfungwa iyi inotisvitsa kune yedu inotevera musoro, kusarudza kuisa mari mushandirapamwe iyo ichakubatsira iwe kukura.
Chengetedza mari mu SEO Campaign
Kune akasiyana siyana zviwanikwa zvinowanikwa kunze uko zvingakubatsira iwe kudzidza izvo zvekutanga zveSEO . Asi maawa asingaverengeki ayo anogona kutora kuti utsvage nyaya inogona kunge ichinetsa. Izvo zvakanyanya chokwadi kana iwe uine bhizinesi diki rinoda kuve rinotarisana nevatengi. Iwe haugone kutarisa pakugadzira kutengesa kana iwe ukapedza nguva iyoyo uchitsvaga kuti webhusaiti yako inogona kumira sei.
Nokubatanidza ruzivo rwako rwechinyorwa neboka raSemalt revanyanzvi, iwe uchave unoona nzira yakatwasuka yekubudirira. Zvakare, ruzivo urwu runogona kukubatsira kuti urambe uine mukana wakapihwa newe naSemalt. Basa redu rinouya kuzove nechokwadi kuti iwo mazwi akakosha aunosarudza anoguma mugwaro rekushanda. Ehe, mishandirapamwe yedu inouya nemazwi akakurudzirwa zvakare.
Iwe unogona kusarudza pakati peakawanda macampaign zvichienderana nehukuru hwewebsite yako uye bhajeti yako. Ive neshuwa yekudzokorora ruzivo rwe AutoSEO uye FullSEO kuti uve nechokwadi chekuti tiri kuzadzisa zvaunoda. Kupiwa nehukuru uye huwandu hwewebhu webhusaiti yako, timu yeSemalt yevanyanzvi vanokwanisa kukubatsira kuita sarudzo yemari yakanakisa.
Sei Kunzwisisa Sei Ongorora SEO Inogona Kubatsira iwe Kusvikira Google Pamusoro
Nekuva nekunzwisisa kwakasimba kwekuongorora SEO, iwe unozogona kuzvipa wega ruoko kukwirisa kumusoro pa google. Ehezve, zvakakodzera uye zvinoverengwa zvemukati zvakakosha mune izvi. Misoro yakakodzera ine akakosha mazwi haangobatsire SEO yako asi ona kuti muverengi anogona kutevera pamwe.
Zvakare, kunzwisisa kushandiswa kwerondedzero yemeta kuchakubatsira iwe kuunza avo vangangowanzozeza newebsite yako. Nekupa CTA mune meta tsananguro, ivo vachaziva zvekutarisira kubva kuchinyorwa chako. Vaverengi vanofemerwa nevaya vane kuvimba nemasikirwo mumashoko avo.
Mazwi akakosha anongo fanika sekuverenga kana zvasvika kune SEO. Nekushandisa Semalt yemahara yekuongororesa mudziyo, unogona kuwana zano rakanaka rekuti utange kupi. Nekuwedzera izvi kunze kuti ubatanidze iyo SEO mushandirapamwe, unogona kushandura iyi nzwisiso muganho dzakanakira. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve zvishandiso izvi, gadzira account nhasi.